प्रतिगमनकारीसँग शीरमा राखेर त्यहीँ पार्टीमा बस्न सकिन्न : रामकुमारी झाँक्री - A complete Nepali news portal based on news & views
१६ श्रावण २०७८, शनिबार १८:२४ July 31, 2021 Buddha Sharan
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी नेतृ रामकुमारी झाक्रीले प्रतिगमनकारीसँग शीरमा राखेर त्यहीँ पार्टीमा बस्न नसक्ने बताएकी छिन। शनिबार अखिल फोर्सको बृहत भेलामा बोल्दै नेतृ झाँक्रीले अध्यक्ष ओली अध्यक्ष पदबाट बहिर्गमन नभएसम्म पार्टी एकता नहुने जिकिर गरिन् ।
उनले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आत्मालोचना गरेर पार्टीको अध्यक्ष पद छाडेपछि मात्र पार्टीमा एकता हुने बताउदै आजको राजनीतिलाई यो स्थितिमा पुर्‍याउनेहरु मेनस्ट्रिमबाट जतिबेला बाहिर हुन्छन्, पार्टी एकताको शर्तमा छाड्छन्, त्यतिबेला मात्र पार्टी एकता हुने बताइन।
झाक्रीले प्रश्नगर्दि भनिन ‘ दुई दुई पटक संसद् विघटन गर्ने प्रतिगमनकारी कि जनादेश ? एउटै पार्टीमा उभिएपछि एउटै धारणा हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यदि प्रतिगमनकारी हो भने त्यहीँ पार्टीलाई शीरमा राखेर बस्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? प्रतिगमन होइन भने प्रतिगमन हो भनेर हामी संसद्मा विद्रोह गरेर अदालतसम्म पुग्नेहरु त्यो पार्टीको सदस्य हुन्छन् कि हुँदैनन् ? ’
पार्टी एकताको बिषयमा आफुहरु विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै सबै प्रश्नको जवाफ १० बुँदे सहमति भित्र रहेको उनले बताइन् ।